Arday badan oo Puntland waxbarashada uga hara qiimo kororka lagu sameeyo waxbarashada (dhegayso) – Radio Daljir
Luulyo 31, 2018 11:33 b 0
Sanad walba carruur badan ayaa waxbarashada ka hara, sababo ay ugu wacantahay qiimo kordhin sanadba sanadka dambeeya ay sameeyaan maamulayaasha iskuulada, haddaba sidee dadwaynuhu u arkaa qiimaha waxbarashada lagu dhigtay Puntland, sideese u saamysay?
Tusaale ahaan Soomaaliland oo daris la ah Puntland Dugsiyada hoose iyo dhaxe ayaa dowladda ay bixisaa qarashkooda, iyadoona ardaydu ay lacag la’aan ku dhigtaan, inkastoo nidaamkaasi maamuladii Puntland soo maray ay ku guul darasyteen.
Waa mowduuca uu maanta ku saabsanaa Barnaamijkii Muqaalka Bulshada ee ka baxa Radiodaljir Subaxkasta .
Hadaba Wariye Xasan Heykal ayaa Warbixintan ka diyaariyay .
Madaxwayne Gaas oo dhagax dhigay dekedda Garacad ee Mudug